Maanta Oo Arbaco Ah Iyo Wararkii Ugu Waa Weynaa Ee Ay Suuqa Kala Iibsiga Ka Qoreen Wargeysyada Ingariiska.
Asalaamu calaykum Warax matulaahi wabarakaatuhu, idilkiinba salaam akhistayaasha hawda nagala socdaw meelkasta oo aad aduunka dacaladiisa ka joogtaan. Waa markale iyo barnaamijkeenii wargaysyadu waxay ka qoreen suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waxaa soo dhawaanaysa maalinta si rasmi ah loo furi doono suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bisha January, waxayna kooxuhu sii calaamadeysanayaan ciyaartoyda ay u arkaan inay kooxahooda xoojin ku samayn karaan inta ka hadhsan horyaalada ay ka tirsan yihiin.
Manchester City ayaa dooneysa inay dalab 30 milyan ginni bisha Janaayo ka gudbiso weeraryahanka Swansea 26 jirka Wilfried Bony. (Telegraph)
City ayaase tartan kala kulmeysa Chelsea kuwaasoo sidoo kale xiiseynaya saxiixa xiddiga reer Ivory Coast Bony. (The Times)
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa u calaamadeystay khadka dhexe inay tahay meesha uu xoojin doono bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. (The Guardian)
Gunners ayaa dalab 25.5 milyan ginni ka gudbineysa 22 jirka khadka dhexe ee Sporting Lisbon William Carvalho. (Daily Star)
AC Milan ayaa u sheegtay kooxaha sida Arsenal iyo Liverpool in weeraryahankooda Stephan El Shaarawy oo 22 jir ah uu qiimihiisa yahay 11.5 milyan ginni haddii ay doonayaan inay la wareegaan bisha Janaayo. (Daily Express)
Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers ayaa doonaya inuu la soo wareego 21 jirka reer Argentina ee kooxda Villarreal Luciano Vietto, kaasoo lagu tilmaamo Aguero-ha cusub. (Mirror)
Everton ayaa dooneysa inay si ku meel gaar ah kula soo wareegto goolhayaha Wigan Ali Alhabsi oo 33 sanno madaama goolhayahooda Tim Howard uu dhaawac uga maqnaanayo muddo lix isbuuc ah. (Daily Mail)
Da’ yarka aadka loo qiimeeyo ee Norway ee khadka dhexe Martin Odegaar oo 16 sanno jir ah ayaa iska diidi doona dhamaan kooxaha waa weyn ee Yurub waxaana uu ka dooran doonaa Southampton isagoo og inuu fursad ka helayo halkaas. (Daily Star)
WARBIXIN: Xidigaha Ay Kooxaha Horyaalka Ingiriisku Ku Waayi Doonaan Koobabka Qaramada Asia Iyo Afrika Ee Sanadka Cusub Ee 2015
Waxaa dhawaan bilaamaya tartamada qaramada Asia iyo Africa, iyada oo uu ka qaramada Asia bilaamayo 9 bisha janaayo, wuxuuna soconayaa illaa 31 ka bishaas halka tartanka xiisaha badan ee Africa uu isaguna furmi doono 17 ka bisha Janaayo.
Haddaba waxaa jira ciyaartoy badan oo ka soo jeeda wadamada Asia ama Africa oo xulalka qaramadooda uga qayb gali doona tartamadaas, waxaana jira kooxo horyaalka ingiriiska ka tirsan oo waayi doona ciyaartoy muhiim u ah.
Haddii aan hoos ugu dagno kooxda horyaalka difaacanaysa ee Manchester City ayaa waayi doonta adeega xidigeeda Yaya Toure kaas oo ku biiri doona xulka qarankiisa Ivory Cost, waxaana waheli doona xidiga ay walaalaha yihiin ee Kolo Toure oo Liverpoool ah iyo Wilfried Bony oo Swansea City u ciyaara isla markaana ay isku Ivory Coast yihiin Toure.
Kooxda Crsytal Palace ayaa waayi doonta kabtan keeda Mile Jedinak kaas oo xulka qarankiisa Australia waajibkiisa ku mashquuli doona iyo Yannick Bolasie oo ka qayb gali doona xulka qarankiisa DR Congo . Waxa kale oo iyaguna koobka qaramada Asia xulalka qaramadooda matali doona Maya Yoshida oo Southampton ah iyo xidiga Swansea City ee Ki Sung-yueng oo ka kala tirsan Japan iyo Jamhuuriyada Kuuriya sida ay u kala horeeyaan.
Kooxaha Man City, Crystal Palace, Southampton, Newcastle United, West Ham United ayaana ciyaartoyda ugu muhiimsan ku waayi doona tartamada qaramada Africa iyo Asia. Kooxaha Arsenal, Man United, Chelsea ayuuna wax saamayn ah ku yeelan doonin tartamada qaramada Afrika halka Liverpool ay ku waayi doonto Kolo Toure oo aan muhiim u ahayn.
Waxaa jirta odhaah tidhaahda ‘masiibada qoom, waa faa’iidada qoom kale’ haddii ay kooxuhu ka walwalsan yihiin xidigaha ay waayi doonaan marka ay bilaamaan tartamada xulalka qaramada Asia iyo Africa, waxaa jirta ciyaartoy ku faraxsan oo fursad fiican ka sii heli doona kooxahooda iyaga oo ka faa’iidaysanaya maqnaanshaas.
Xidiga kooxda Newcastle United ee Ayoze Perez ayaa fursad fiican u heli kara inuu ku bilaamo kulamada ay ciyaari doonto kooxdiisa Newcastle United marka uu Papiss Cisse ku biiro xulka qarankiisa Senegal.
Halka xidiga West Ham United Enner Valencia uu isaguna ka faa’iidaysan doono maqnaanshaha xidigaha ree Senegal ee Cheikhou Kouyate iyo Diafra Sakho.
Ugu danbayn Wilfried Zaha ayaa heli doona fursad uu waqti badan ku ciyaaro isla markaana uu ku bilawdo kulamada Crystal Palace marka ay kooxda ka tagaan Yannick Bolasie oo DR Congo ah,Mile Jedinak oo Australia ka tirsan iyo Adlene Guediora oo xulka qaranka Algeria matali doona.
Xidigaha koobka Qaramada Asia Ka Qayb gali doona iyo kooxaha ay ka maqnaan doonaan:-
Aston Villa: Chris Herd (Australia); Crystal Palace: Mile Jedinak (Australia);Southampton: Maya Yoshida (Japan); Swansea: Ki Sung-yueng (Korean Republic); West Bromwich Albion: Jason Davidson (Australia).
Xidigaha Koobka Qaramada Afrika ka qayb gali doona iyo kooxaha ay ka maqnaan doonaan:-
Crystal Palace: Yannick Bolasie (DR Congo), Adlene Guediora (Algeria); Everton:Christian Atsu (Ghana); Hull City: Mo Diame (Senegal); Leicester City: Riyad Mahrez (Algeria), Jeffrey Schlupp (Ghana); Liverpool: Kolo Toure (Ivory Coast); Man City: Yaya Toure (Ivory Coast); Newcastle United: Mehdi Abeid (Algeria), Papiss Cisse (Senegal), Cheick Tiote (Ivory Coast); Southampton: Sadio Mane (Senegal), Emmanuel Mayuka (Zambia); Stoke City: Mame Biram Diouf (Senegal); Swansea City: Wilfried Bony (Ivory Coast); Tottenham Hotspur: Nabil Bentaleb (Algeria); West Brom: Youssouf Mulumbu (DR Congo); West Ham: Cheikhou Kouyate, Diafra Sakho (both Senegal).
Liverpool Oo Dooneysa Xiddig Lagu Tilmaamay Aguero-ha Cusub Si Ay Ugu Buuxiyaan Booska Uu Baneeyay Suarez.
Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers ayaa doonaya xiddig lagu tilmaamay Sergio Aguero-ha cusub si uu ugu bedelo xiddigii ay hore u jeclaayeen taageerayaasha ee Luis Suarez, sida ay ku warameyso Daily Mirror.
Laakiin tababaraha Reds ayaa u baahnaan doona inuu 12 milyan ginni soo bandhigo si uu meesha uga saaro xiisaha ay Real Madrid iyo Inter Milan u qabaan weeraryahanka Villarreal Luciano Vietto.
Rodgers ayaa diiradiisa u weeciiyay 21 jirka Vietto ka dib markii uu qirtay in Mario Balotelli uusan ku habooneyn qaab ciyaareedkiisa.
Weeraryahankii hore ee Manchester City Balotelli ayaa ku guuldareystay inuu ka soo dhex muuqdo Premier League tan iyo markii xagaagii ku soo laabtay isagoo aan wax gool ah dhalin 10 kulan oo uu u ciyaaray horyaalka kooxda Anfield.
Vietto ayaa lala meel dhigay ninka ay isku wadanka yihiin ee Aguero kaasoo dhaliyay 94 gool 141 kulan uu u saftay Manchester City tan iyo markii uu 38 milyan ginni uga soo wareegay Atletico Madrid bishii July 2011.
Laakiin Rodgers ayaan ka filaneynin in Vietto uu wacdarro u dhigo sida Aguero, ama inuu iska dhigo sida Suarez kaasoo xilli ciyaareedkii hore kooxda ku hogaamiyay kaalinta labaad, laakiin waxa uu aaminsan yahay in da’ yarkaan uu yahay mid si joogta ah goolal u dhalin kara oo dib u soo kicin kara Reds.
Barcelona Oo Laga Soo Diiday Racfaankii Ay Ka Qateen Xayiraadii Laga Saaray Suuqa Kala Iibsiga, Waxba Sooma Iibsan Karaan 2015
Barcelona ayaan awoodi doonin inay wax saxiixyo ah sameysay 2015 ka dib markii racfaankii ay ka qaateen xayiraadii laga saaray labo suuq kala iibsi ay soo diiday maxkamada isboortiga ee CAS.
Kooxda Catalans ayaa xayiraada dhanka suuqa kala iibsiga waxaa ku soo rogtay FIFA ka dib markii lagu helay danbi ah inay caruur yaryar ay ka keensaday meelo ka baxsan Spain taasoo sharciga suuqa kala iibsiga ka horimaaneysa.
Waxaana racfaanka ay ka qaateen soo diiday maxkamada caalamiga ee Isboortiga kuwaasoo sheegay in ganaaxa FIFA ay saartay Barcelona inuu sidiisa u jiro, taasoo la micno ah in Barcelona aysan wax saxiix ah sameyn karin bisha Janaayo iyo xagaaga danbe marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
“CAS waxa ay soo diiday racfaankii ay Barcelona ka qaadatay go’aankii FIFA” ayuu lagu yiri warbixin ka soo baxday maxkamada.
Racfaankii ay Barcelona u gudbisay CAS ayaana dib u dhigtay ganaaxii hore taasoo u ogolaatay inay soo iibsadeen Luis Suarez, Ivan Rakitic, Alen Halilovic iyo kuwa kale suuqii kala iibsiga ee xagaaga,
Barcelona ayaa loo ogolaan doonaa kaliya inay wax ku soo daraan kooxdooda bisha Janaayo 2016, waxaana ay sidoo kale bixin doonaa ganaax lacageed oo gaaraya 375 kun euro.
Liverpool Oo Gurigeeda Anfield Cashar Lama Ilaa Waan Ah Ugu Dhigtay Swansea City, Xili Ay Sanadkan 2014 Ku Soo Xidhatay Guul Muhiim Ah
Kooxda Liverpool ayaa gurigeeda Anfield cashar lama ilaawaan ah ugu dhigtay kadib markii ay 4:1 ku dardartay. Liverpool ayay goolasha u kala dhaliyeen Adam Lallana oo laba gool dhaliyay , Alberto Moreno oo goolka furitaanka u saxiixay halka goolka afraad uu ahaa mid uu iska dhaliyay Shelvey. Waa guushii ugu waynayd ee ay Liverpool xili ciyaareedkan goolal intan leeg ku badiso waxayna sanadka 2014 ku soo xidhatay guul ay u aad ugu baahnayd.
Liverpool ayaa Anfield ku soo dhawaysay kooxda Swansea,Kulankan ayaana ahaa ka ugu danbeeyay ee kulamada 19 aad ee kala badhka u ah horyaalka Ingiriiska. Kulankan ayaana sidoo kale ah kulanka horyaalka Ingiriiska ugu danbeeya sanadkan 2014 ka.
Liverpool ayaana kulan aad ugu baahanayd inay guulaysato si ay u soo noolayso rajadeeda inay xili ciyaareekan u soo baxdo Champions Leaquega. Kooxda Swansea City ayaana ah kooxda marti iyo minanba kooxaha ku adkaysa, mana noqon doono kulankani mid sahlan.
Rodgers ayaa shaxdiisa isbadal wayn ku sameeyay,Kabtanka Liverpool ee Steven Gerrard ayaa kursiga kaydka ku bilawday halka Markovic oo kulamadii u danbaysay shaxda Rodgers ku bilaabanayay uu isaguna Gerrard kursiga kaydka ku wehelinayay. Mario Balotelli ayaa wali sii fadhiyay doona kursiga kaydka Liverpool.
Liverpool ayaana ciyaarta kubilaabatay qaab ciyaareed fiican iyada oo bilawgii ciyaartaba la wareegtay kubbad haysashada, waxayna Reds abuurtay fursado ay goolal dhawr ah ku dhashan kari lahayd. Balse fursada ay Liverpool goolka ku dhashatay ayaa timid daqiiqadii 33 aad markaas oo uu difaaceeda bixid ee Alberto Moreno goolka firitaanka u dhaliyay.
Kubada uu ka soo shaqaystay dhinaca bixid ayuu Moreno la soo galay khadka dhexe wuxuuna u sii dhiibtay Adam Lallana kaas oo isaguna kubada isku sii dhaafiyay Henderson oo joogay baasha midig, Henderson ayaana kubbada soo hormariyay goolka Swansea City, waxaana halkaas ku sii sugayay Moreno oo kubbadaas soo bilaabay hallkaas ayuuna goolka furitaanaka Reds ugu dhaliyay. ciyaarta ayaana noqotay 1:0 ay Liverpool ciyaarta hogaanka ugu qabatay.
Inkasta oo markii goolka laga dhaliyay ay Swansea City bilawday inay weerar soo qaado ayayna haddana qaybtii hore ee ciyaarta samaynin hal bartilmaameed. goolhaye Mignolet ayaana qaybtii hore u ahayd mid nasasho ah. qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 1:0 ay Liverpool kubbad iyo natiijo ahaanba ku saraysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Liverpool halkii ka sii waday qaab ciyaareedkeedii fiicnaa ee ay soo bandhigtay qaybtii hore ee ciyaarta. Daqiiqadii 51 aad ayuuna Adam Lallana qalad uu sameeyay goolhayaha Swansea City ee Fabianski ku ciqaabay kadib markii uu kubbad uu laagayay ay inta ay ku dhacay Lallana ay sidaa ku dhalatay, ciyaarta ayaana noqatay 2:0 ay Liverpool hogaanka ku dheerayasatay.
Hal daqiiqo oo kaliya kadib goolka uu Lallana dhaliyay ayuu Gylfi Sigurdsson kooxdiisa Swansea City udhaliyay goolkeeda kowaad,wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:1 ay wali Liverpool hogaanka ku hayso. intaa wixii ka danbaysayna ciyaarta ayaa sii shidan tahay.
ciyaarta ayaana ku sigatay in saddex daqiiqo oo isku xiga goolal layska dhaliyo kadib markii uu Sterling birta u garaacay Swansea City daqiiqadii 53 aad.
Intaa wixii ka danbaysay ayay ciyaartu noqotay mid furan, waxaana markale daqiiqadii 61 aad goolkiisa labaad dhaliyay Adam Lallana, kaas oo ciyaarta ka dhigay 3:1 ay Liverpool markale ciyaarta hogaankeeda ku dheeraysatay. Haddii uu goolka hore Lallana nasiib ku dhaliyay ayuu goolkiisa labaad ahaa mid uu si qurux badan uga habaystay difaaca Swansea City.
Kadib markii ay Liverpool culays aan caadi ahayn saartay difaaca Swansea City ayuu daqiiqadii 69 aad Jonjo Shelvey iska si qalad ah iskaga dhaliyay goolka kooxdiisa niyada ka sii dilay ee afraad. Kubbad koorne ahayd oo uu soo tuuray Henderson ayuu Shelvey goolkaas iskaga dhaliyay ciyaarta ayaana noqotay 4:1 ay Liverpool ku dhibaataynayso kooxda martida u ahayd ee Swansea City.
Waa guushii ugu waynayd ee ay Liverpool xili ciyaareedkan goolal intan leeg ku gaadho, waxayna sanadkan 2014 ku soo gabgabaysay guul iyo waliba qaab ciyaareed layaableh oo ay ku dardartay kooxda martida u ahayd ee Swansea City. ugu danbayn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 4:1 ay Liverpool guusha ku gaadhay.Liverpool ayaana Swansea City kala baxday booska 8 aad oo ay markii hore ku jirtay.
Ronaldo oo xaflada abaal marinaha lagu bixinayay ka hadlayay ayaa yidhi: “Waxaan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo dadka Real Madrid, ciyaartoyda Kooxda iyo tababaraha Real Madrid. Waxaanu soo qaadanay xili ciyaareed fantastik ah, waxaananu ku guulaysanay afar koob, waxaanu nahay mid ka mid ah kooxaha aduunka ugu fiican”.
“Inaan Champions Leaque-ga ku guulaysanaa waxay ahayd wax khaas ah, waxaanan wanaag ka rajaynaa inaan markale ku guulaysano. In aan abaal marintan ku guulaystaa waa farxada iigu wayn aadna waan ugu hanwaynahay
Maanta Oo Axad Ah Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Xigaha La Kala Doonayo
Waxaa soo dhawaanaysa maalinta si rasmi ah loo furi doono suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bisha January, waxayna kooxuhu sii calaadsanayaan ciyaartoyda ay u arkaan inay kooxahooda xoojin ku samayn karaan inta ka hadhsan horyaalada ay ka tirsan yihiin.
AC Milan ayaa bilaash kula wareegtay gooldhalihii kooxda Chelsea ee iyada amaahda kula joogay ee Farnando Torres. Kooxaha Milan iyo Chelsea ayaa xalay soo saaray war murtiyeed ay ku cadaynayaan in Torres uu 5 bisha January dhamaystiri doono heshiiska rasmiga ah ee uu ugu biirayo Milan. Laakiin Torres ayaa dib ugu laaban doona kooxdiisii hore ee Atletico Madrid, iyada oo Milan ay fursad u heli doonto inay Torres dhaafsato xidiga Atletico Madrid ee Cerci. Wali makala cada in Torres uu amaah ugu biiri doono A. Madrid iyo inay si rasmi ah isku dhaafsan doonaan Cerci iyo Torres./Goal/Daily Mail.
Real Madrid ayaa dhigeeda Man United u sheegtay inaysan Gareth Bale ku iibin doonin xataa haddii ay miiska soosaarto lacag dhan 300 oo milyan oo yuro. Man United ayaa lala xidhiidhinayay inay Bale ku doonayso lacag lagu qiyaasay illaa inta u dhaxaysa 125-150 milyan oo yuro.Balse Real Madrid ayaa albaabkaas iska xidhay/ Daily Express.
Kooxda Arsenal ayaa isku diyaarinaysa inay 7.5 milyan ku dalbato xidiga kooxda Saint-Etienne ee Loic Perrin. Wenger ayaana doonay inuu bisha January xidigan khadkiisa dhexe ku soo xoojiyo. Wenger ayaa sidoo kale isku dayi doona bartilmaameedkiisii hore ee Morgan Schneiderlin oo ka tirsan kooxda Southampton./Daily Mirror.
Dhinaca kale kooxda Arsenal ayaa markale soo cusboonaysiisay xiisaha ay u hayso xidiga kooxda Sporting ee William Carvalho. Wararka ayaa sheegay in Wenger uu qorshaynayo inuu xidigan ka gudbiyo dalab qiimihiisu dhan yahay 25 milyan oo yuro./Daily Mail.
Liverpool ayaa qorshaynaysa inay bisha January la soo wareegto xidigaha kooxda Aston Villa ee Vlaar iyo Delph. Reds ayaa doonaysa inay labadan xidig kula soo wareegto 20 milyan oo yuro. Labadan xidig ayuu heshiiska ay Aston Villa kula jiraan uu dhacayaa xagaaga soo socda. Aston Villa ayaana kala dooran doonta inay xagaaga bilaash kaga tagaan iyo inay bisha January lacag ka samayso./Daily Star .
Haddii ay Real Madrid albaabka Bale ka xidhatay kooxda Man United ayay haddana iyadu Man United ka doonaysaa goolhayaheeda David De Gea. Warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in Real Madrid ay aqbali karto dalabka Man United ee Bale haddii uu heshiiska qayb ka noqdo goolhaye David De Gea./Daliy Mirror
Inter Milan ayaa isku diyaarinaysa inay soo gabgabayso heshiis amaah oo ay kula wareegayso xidiga kooxda Chelsea ee Mohamed Salah. Roberto Mancini ayaa sidoo kale doonaya inuu Arsenal bisha January 7 milyan kaga dalbado Lukas Podlski haddii uu iibku waayna inuu amaah ku qaato balse Gunners ayaa doorbidaysa in Inter ay amaah ku qaadato Yaya Sango/ Dailymail.
Falanqaynta Kulanka Man City Vs Burnley Iyo Citizens Oo Raadinaysa Guusheedii 10 Aad Oo Xidhiidh Ah
Kulanka : Manchester City Vs Burnley
Waqtiga: 6 gabanimo ee saacda geeska afrika
Kooxda horyaalka difaacanaysa ee man City ayaa Etihad Stadium ku soo dhawayn doonta kooxda Burnley, City ayaana raadinaysa guusheedii 10 aad oo xidhiidh ah ee tartamada oo dhan.
Kadib markii ay kulankii Boxing day-ga guul raaxo leh West Brom gurigeeda kaga soo gaadhay ayay markale ugu cad cadahay inay gurigeeda guulkale kaga kaago kooxda Burnley.
Labadan kooxood ee Manchester City iyo Burley ayaa horyaalka iskaga hor yimid 86 kulan, Man City ayaana guulaysatay 36 kulan oo ka mid ah, 23 kulan ayayna barbaro galeen halka kooxda Burnley ay ka guulaysatay 27 kulan.
City ayaa war fiican ka heshay kabtan keeda Vincent Kompany kaas oo markale diyaar u ah doorasha difaac ee Manuel Pellegrini, kadib markii uu dhawac ka soo kabsaday.
Kadib markii ay City labadii kulan ee ugu danbaysay ay ku ciyaaraysay bilaa gooldhaliye la’aan ayuu hadda kulanka Burnley ku soo bilaaban karaa Stevan Jovetic, isaga oo kulankii West Brom ahaa badal aan la isticmaalin.
Laakiin Edin Dzeko iyo Sergio Aguero ayaa kooxda Pellegrini ka sii maqnaan doona halka uu kabtan Kompany diyaar u yahay inuu dib uga soo laabto dhaawacii muruqa ahaa ee uu la maqnaa.
Dhinaca Burnley Sam Vokes ayaa la filayaa inuu ku bilaan doono Etihad Stadium kadib markii uu kulankiisii uu inta badan sugayay ciyaaray kulankii Liverpol. Waxaana sidoo kale la filayaa inuu taam noqdo Matt Taylor kaas oo dhawac ka soo kabsaday.Laakiin Michael Duff iyo Stephen Ward ayay hubaal tahay inay kulanka City seegi doonaan
Line Upka Suurtogalka Ah Ee City:
Hordhac: West Ham Vs Arsenal Iyo Gunners Oo Ku Hamiyaysa Guushii Labaad Ee London Derby Oo Xidhiidh Ah
Kulanka: West Ham Vs Arsenal
Waqtiga: 6:00 Galabnimo ee saacda Geeska Afrika
Garsooraha: Neil Swarbrick
Kooxda Arsenal ayaa booqanaysa kooxda ay isku magaalada yihiin ee West Ham, Gunners ayaa doonaysa inay gaadho guusheedii labaad oo xidhiidh ah oo ay ka gaadho laba kulan oo London derby ah.
West Ham United ayaa ku dadaali doonta inay dhib ku abuurto difaaca Gunners, iyada oo West Ham caanku ah kubbadaha madax ah ee ay Arsenal u nugushahay.
Arsenal ayaa kulankii hore guul ka soo gaadhay isla kooxda ay isku magaalada yihiin ee QPR. Haddii ay Arsenal kulankan guulaysato ayay wax fiican u noqon doontaa kooxda isla markaana ay ku gaadhi kartaa kulankii labaad ee London derbi ah oo xidhiidh ah.
Alex Song iyo Diafra Sakho ayaa la rajaynaaa inay dhawacyo ka soo kabsadaan, waxayna taam unoqon karaan kulankan Arsenal. Song ayaana ka hor iman doona kooxdiisii hore ee Gunners.James Tomkins oo muruqa dhaawac ka qaba ayay ubadan tahay inuu kulan seego halka uu James Collins ka sii wadan doono difaaca dhexe.
Dhinaca kale weerar yahanka Arsenal ee Giroud ayay u bilaami doontaa saddexdii kulan ee ganaaxa ahaa kadib markii uu kaadhka cas oo toos ah qaatay kulankii QPR, isaga oo arintaa ku mutaystay herdidii uu ugaystay xidiga QPR.
Difaaca Arsenal ee Laurent Koscielny ayaa lafilayaa inuu ku soo laabto kooxda kadib markii uu ka soo kabsaday dhaawac muruqa ah, laakiin Arsenal ayay ka sii maqnaan doonaan Aaron Ramsey , Mikel Arteta , Mesut Ozil , Abou Diaby , Jack Wilshere iyo Serge Gnabry.
West Ham ayaan wax guul ah ka gaadhin kooxda Arsenal 12 kii kulan ee ugu danbaysay ee ay iskaga horyimaadaan horyaalka ingiriiska.laba kulan ayay barbaro la gashay halka ay 1o kulan guuldaro kala kulantay.
Theo Walcott ayaa shan gool ka dhaliyay kooxda Hammers afatii kulan ee ugu danbaysay halka uu Lukas Podolski afartii kulan ee ugu danbaysay West ham ka dhaliyay afar gool. Sidoo kale Giroud ayaa afartii kulan ee ugu danbaysay isaguna West Ham ka dhaliyay afar gool laakiin kulankan ayuu ganaax ku seegayaa.
West Ham Iyo Arsenal ayaa horyaalka ingiriiska ku kulmay 112 kulan. West Ham ayaa guulaysatay 27 kulan, waxayna barbaro galeen 32 kulan halka Gunners guulaysatay 53 kulan
Line Upka Suurtogalka Ah ee Arsenal: